Esi tinye akaụntụ Google
Ozugbo ị debanyere aka maka Google, oge eruola ka ị gaa na ntọala akaụntụ gị. N'ezie, enweghi ọtụtụ ntọala, ha dị ha mkpa iji nweta ọrụ Google. Tụlee ha n'ụzọ zuru ezu. Banye na akaụntụ google gị. Maka ama ndi ozo: Otu esi abanye na akaụntụ Google gi Pịa igodo gburugburu tinyere isi akwukwo ozi nke aha gi n'elu aka nri elu nke ihuenyo.
Eke ahịrị na Google Spreadsheet
Ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọfụma na Google, nke dị n'ime nchekwa nchekwa ígwé ojii ha, na-ewu ewu nke ọma n'etiti ndị ọrụ n'ihi nnwere onwe ya dị mfe. Ọ na-agụnye ngwa weebụ dị otú ahụ dị ka Ngosipụta, Ụdị, Akụrụndụ, Tebụl. A ga - atụle ọrụ ahụ na njedebe, ma na ihe nchọgharị na PC na ngwaọrụ mkpanaka, n'isiokwu a.
Chọọ site na nhazi na Google Maps
Chọọ na Google Maps Gaa na Google Maps. Iji mee nnyocha, ikike bụ nhọrọ. Hụkwa: Idozi nsogbu na ịbanye n'ime akaụntụ Google Ihe nhazi nke ihe a ga-abanye n'ime ụlọ mmanya ahụ. A na-ahapụ usoro ntinye ndị na-esonụ: Ogo, nkeji na nkekọ (dịka ọmụmaatụ, 41 ° 24'12.2 "N 2 ° 10'26.5" E); Oge ogo na nkeji iri (41 24.
Otu esi eweghachi akaụntụ gị na Google
Enweghi ike ịnweta akaụntụ Google abụghị ihe ọhụrụ. Nke a na-emekarị n'ihi na onye ọrụ ahụ chefuru paswọọdụ. N'okwu a, ọ gaghị esiri ike iweghachi ya. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ iweghachite akaụntụ na-ehichapụ ma ọ bụ egbochi? Gụọ na ebe nrụọrụ weebụ anyị: Otu esi weghachite paswọọdụ na akaụntụ Google gị Ọ bụrụ na ehichapụ akaụntụ ahụ Ozugbo ahụ, anyị na-achọpụta na ị nwere ike weghachite akaụntụ Google gị, nke ehichapụghị ihe karịrị izu atọ gara aga.
Otu esi emepụta table google
Site n'enyemaka nke ọrụ ụlọ ọrụ Google, ị nwere ike ịmepụta ọ bụghị naanị akwụkwọ ederede na ụdị maka ịnakọta ozi, ma tebụl yiri nke ndị e gburu na Microsoft Excel. Isiokwu a ga-ekwu banyere Google Tables na nkọwa zuru ezu. Iji malite ịmepụta spreadsheets Google, banye na akaụntụ gị.
Tinye saịtị gị na nchọta ọchụchọ Google
Ka e were ya na ị mepụtara saịtị, ma o nweelarị ụfọdụ ọdịnaya. Dị ka ị maara, onye ọrụ weebụ na-arụ ọrụ ya nanị mgbe ndị ọbịa na-elele ibe ma mepụta ụdị ọrụ. N'ozuzu, a na-etinye usoro nke ndị ọrụ na saịtị ahụ na echiche nke "okporo ụzọ". Nke a bụ kpọmkwem ihe mkpa anyị "na-eto eto".
Esi edozi Google dị ka mmalite peeji nke nchọgharị
O doro anya na Google bụ search engine kachasị mma n'ụwa. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ ndị ọrụ na-amalite na-arụ ọrụ na netwọk sitere na ya. Ọ bụrụ na i mee otu ihe ahụ, ịtọlite ​​Google dịka mmalite nke ibe weebụ gị bụ ezigbo echiche. Nchọgharị ọ bụla dị iche iche n'ihe banyere ntọala na ọtụtụ mpaghara.
Ịmepe akwụkwọ gị na akwụkwọ mpịakọta Google
Google Docs bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nke, n'ihi na ọ na-enweghị ohere na cross-platform, karịrị karịa asọmpi ruru eru nye onye ndu ahịa, Microsoft Office. N'ihe ha mejupụtara na ngwá ọrụ maka ịmepụta na ederede ederede, n'ọtụtụ ụzọ ọ bụghị dị ala karịa Excel kachasị ewu ewu.
Google Maps nwere ọrụ bara uru. Ọ dị nnọọ mfe ma ị chọghị oge dị ukwuu ịchọta ụzọ kachasị mma site na "A" iji kwuo "B". N'isiokwu a, anyị ga-enye ntụziaka zuru ezu banyere otu esi enweta ntụziaka site na iji ọrụ a. Gaa na Google Maps.
Ịwụnye Google Translate na ihe nchọgharị na-ewu ewu
Ozi na weebụsaịtị dị iche iche na Intanet, ọ dị mwute maka ọtụtụ ndị ọrụ, a na-enyekarị ya n'asụsụ ọzọ karịa Russian, ma ọ bụ Bekee ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. N'ụzọ dị mma, ị nwere ike ịsụgharị ya na ntinye ole na ole, isi ihe bụ ịhọrọ ngwá ọrụ kachasị mma maka nzube ndị a.
Otu esi emepụta akwụkwọ Google
Akwụkwọ Ọrụ Google nyere gị ohere ịrụ ọrụ na faịlụ ederede ozugbo. Mgbe gị na ndị ọrụ gị jikọtara ọrụ na akwụkwọ, ị nwere ike idezi ya, dozie ma jiri ya. Enweghị mkpa ịchekwa faịlụ na kọmputa gị. Ị nwere ike ịrụ ọrụ na akwụkwọ ọ bụla na mgbe ọ bụla ịchọrọ iji ngwaọrụ ị nwere.
Ndị na-anaghị akpakọrịta na Google: nkwụsị nsogbu
Ngwá ọrụ sistemụ mkpanaka mobile, dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ọ bụla nke oge a, na-enye ọrụ nke na-eme ka nchedo nke data njirimara onwe onye. Otu ngwá ọrụ dị otú ahụ bụ mmekọrịta nke kọntaktị, okwuntughe, ngwa, ndenye kalenda, wdg. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ihe dị mkpa nke Os na-akwụsị ịrụ ọrụ nke ọma?
Ntugharị site na Google Translator
N'ime ọrụ niile dị ugbu a maka ịsụgharị Google bụ ihe kachasị ewu ewu ma n'otu oge ahụ dị elu, na-enye ọtụtụ ọrụ ma na-akwado asụsụ niile nke ụwa. N'okwu a, mgbe ụfọdụ, ọ ga-adị mkpa ịsụgharị ederede site na mbiet ahụ, nke otu ụzọ ma ọ̄ bụ nke ọzọ nwere ike isi mee ihe ọ bụla n'elu ikpo okwu.
Esi abanye na Google Photos
Photo bụ ọrụ na-ewu ewu sitere n'aka Google nke na-enye ndị ọrụ ya ohere ịchekwa nọmba na ihe na-enweghị njedebe nke ihe oyiyi na vidiyo na àgwà mbụ ha na ígwé ojii, ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na mkpebi nke faịlụ ndị a adịghị elu 16 Mp (maka ihe oyiyi) na 1080p (maka vidiyo). Ngwaahịa a nwere ole na ole ọzọ, ọbụna ihe ndị ọzọ bara uru na ọrụ, ma iji nweta ha, ị ga-ebu ụzọ banye na saịtị ọrụ ma ọ bụ onye ọrụ ngwa.
Ihe nchọgharị nchọgharị Google
Google na-emepụta ọtụtụ ngwaahịa, ma search engines, Android os na Google Chrome nchọgharị kachasị achọ n'etiti ndị ọrụ. A pụrụ ịgbasa ọrụ ndị dị na nke ikpeazụ site na iche iche tinye-ons dị na ụlọ ahịa ụlọ ahịa, mana ha na-enwekwa ngwa weebụ.
Ndozi ezighi ezi "Google Talk authentication failed"
Dị ka ngwaọrụ ọ bụla, ngwaọrụ Android nọ n'okpuru ụdị dịgasị iche iche nke njehie, otu n'ime ha bụ "Google Talk authentication failure". N'oge a, nsogbu ahụ dị obere, mana ọ na-akpata ihe ndị dị nkpa doro anya. Ya mere, ọ bụkarị ọdịda na-eduga na enweghị ike ibudata ngwa si Ụlọ Ahịa Play.
Otu esi abanye na akaụntụ Google gị
Imirikiti atụmatụ nke Google dị mgbe ị debanyere akaụntụ. Taa, anyị ga-atụle usoro ikike na usoro. Na-emekarị, Google na-echekwa data abanye n'oge ndebanye aha, yana site na ịmepụta nyocha, ị nwere ike ịbanye ozugbo. Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ ị 'si apụ na akaụntụ gị' (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị kpochapụrụ ihe nchọgharị) ma ọ bụ na ịbanye na kọmputa ọzọ, na nke a, a chọrọ ikike na akaụntụ gị.
Na-agbanye onye na-achị na Google Maps
Mgbe eji Google Maps, enwere ọnọdụ mgbe ọ dị mkpa iji tụọ anya dị anya n'etiti ihe ndị na-achị achị. Iji mee nke a, a ghaghị ịrụ ọrụ a site na iji mpaghara pụrụ iche na menu nhọrọ. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere nsonye na ojiji nke onye na-achị na Google Maps.
Otu esi ejikọ Google na Google
Ọ bara uru na-eche echiche ịchekwa listi kọntaktị na ngwaọrụ gam akporo ma ọ bụrụ na ịchọrọ imegharị ma ọ bụ na-egbu maramara. N'ezie, ndetu aha kọntaktị mara mma - mbubata / mbupụ nke ihe ndekọ nwere ike inyere aka na nke a. Otú ọ dị, e nwere ihe ọzọ, nhọrọ kachasị mma - mmekọrịta na "igwe ojii".
Otu esi eji Google Drive
Nbudata Google bụ ọrụ dị n'ịntanetị nke na-enye gị ohere ịchekwa ụdị faịlụ dị iche iche ị nwere ike imeghe ohere ọ bụla onye ọrụ. Ogwe mbanye Google na igwe nwere nnukwu nchebe na ịrụ ọrụ ike. Google Disk na-enye mgbagwoju anya na oge iji rụọ ọrụ na faịlụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Google 2020